Herinandro miaraka amin'ny beta an'ny macOS Sierra 10.12 napetraka | Avy amin'ny mac aho
Herinandro miaraka amina macOS Sierra 10.12 beta napetraka
Ho an'ireo rehetra mbola tsy tapa-kevitra ny hametraka na tsia ny kinova beta ampahibemaso izay nivoaka andro vitsy lasa izay tao amin'ny macOS Sierra 10.12, dia amporisiho raha te hanandrana ianao dia aza matahotra ary apetaho mivantana amin'ny kapila mafy ivelany. na amin'ny famoronana fizarazarana fotsiny eo aminy. kapila an'ny rafitray. Tena mora ny manao an'io ary manolotra antsika ny fahafaha-mitsapa ny kinova beta an'ny macOS vaovao natolotra tamin'ny WWDC 2016 lasa teo ka vetivety dia natombok'izy ireo avy any Cupertino izy ireo.
Amin'ity tranga ity dia hiteny kely momba ny zavatra niainana tamin'ny beta 1 ho an'ny mpamorona hatramin'ny fametrahana ny beta 2 ho an'ny daholobe natomboka efa ho herinandro lasa izay aho. Miharihary amin'ny tranga misy ahy Tsy mampiasa kinova beta ho toy ny rafitra miasa aho ary ampiasaiko tsotra izao hitetezana, hampiasa Siri indraindray ary hanamarinana ny fahamarinan'ny rafitra fiasa izay ho tonga amin'ny fomba ofisialy amin'ny Mac amin'ity volana septambra ity.
Ny marina dia saika miasa tsara daholo ny rindrambaiko napetraka rehetra ary hahazoana hevitra dia holazaiko fa macOS Sierra public beta no kinova ampiasaiko amin'ny iMac Late 2012. Amin'ny fitsipika, araka ny nolazaiko, ny rindranasa rehetra ampiasako dia miasa avokoa, saingy marina fa ny fitaovana lehibe fampidinana ireo rindranasa ireo amin'ny Mac dia indraindray maharesy ahy, fa tsy mandiso maharitra ny fametrahana ny rindranasa sasany ary indraindray dia mikatona irery ny Mac App Store. Ny mpampiasa tsirairay voasoratra ao amin'ny programa beta ho an'ny daholobe dia manana safidy handefasana bibikely hita miaraka amin'ny Assistant Feedback ho an'ireo injenieran'ny Apple mampiasa ny Apple ID an'ny mpampiasa.
Raha fintinina dia miasa tsara i Siri, mamela anao hanafaingana ny asa fikarohana sasany ohatra, fa Manelingelina ahy be dia be ny tsy ampiany ilay "Hey Siri" satria amin'ny Macs dia mety hamokatra be indraindray ary ny tsy fananana azy dia mampihena kely ny fahafaha-manao. Ho an'ny ambiny amin'ireo safidy vaovao dia azontsika atao ny manasongadina ny safidy hamaha amin'ny Apple Watch na ny Split View Safari izay nohatsaraina.
Raha fintinina, ny herinandro voalohany dia tsara amin'ny ankapobeny ary antenaina fa hihatsara izany rehefa mandeha ny andro mandra-pahatongan'ny kinova ofisialy. Ka ny tolo-kevitra dia izayraha te hametraka macOS Sierra beta ho an'ny daholobe amin'ny Mac ianao, aza matahotra ary mandrosoa, fa raha, amin'ny fizarazarana raha sendra ny lalitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Sierra » Herinandro miaraka amina macOS Sierra 10.12 beta napetraka
Ny iray amin'ireo hadisoana hitako dia ny tsy fametrahana ny kapila ivelany (USB) misy azy. Nataoko daholo ny soso-kevitra rehetra momba ireo tranga ireo (NVRAM, SMC) ary tsy miova izany.
Tsy maintsy miandry ny kinova beta manaraka isika raha hahitana raha efa voavahan'izy ireo izany.
Mividy Apple Watch amin'ny aliminioma na vy?